Madaxweyne Yuusuf iyo wasiirka arrimaha dibadda Itoobiyo oo shalay iyo maanta uga wada hadlay Villa Soomaaliya waxa laga yeelayo xaaladda nabadgelyada Xamar iyo mudanayaasha baarlamaanka DF oo maanta ka doodaya talaabada laga qaadaya 42 xildhibaan oo loo arkoo in ay isku fikad yihiin Shariif Xasan. Ruunkinet 15/03/07
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf Axmed ayaa wadahadal xasaasi ah kula sheegay ra'isul wasaaraha dowladda Itoobiya madaxtooyada Villa Soomaaliya laba maalmood.
Col. Yuusuf iyo Musfin oo booqasho qarsoodi ay ku joogay magaalada Muqdisho shalay iyo maanta ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen sidii ay dowladda federaalka ah uga shaqeyn lahayd magaalada Muqdisho.
Labada mas'uul ayaa la sheegay in ay kawada hadleen sidii xoog loogu maquunin lahaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho looguna baari lahaa guryahooda iyo hantoodooda kale si hubka looga dhigo.
Mr. Musfin oo haatan ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu kala tashanaya ra'isul wasaaraha dowladda Itoobiya waxa ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya sida laga yeelaya 42 xildhibaan oo la aaminsan yahay in ay ku firkad yihiin Xildhibaan Shariif Xasan oo haatan ku sugan dalka Eriteriya.
42da xildhibaan ayaa oo ay qaardood ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in la doonayo in xilka laga qaado kuwa ka maqan magaalada Baydhabo ayadoo la sheegaya kuwa ku sugan magaalada Baydhabo oo ka mid ah 42 xildhibaan in si gaar ah loo faqooqay ayadoo horay loogu diiday in ay ka qeyb galaan kulanka baarlmaanka ee magaalada Baydhaho.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ay wadaan qaar ka tirsan guddiga anshaxa ee golaha baarlamaanka in xilka laga qaado mudanayaasha baarlamaanka ee dalka ka maqan gaar ahaan kuwa aan fasax ka haysan ra'isul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya.